AH: နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် နန်တုန်
ဒါ့အပြင် တရုတ်အရှေ့ပိုင်းဒေသ လွတ်လပ်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရတဲ့ ဒေသခြောက်ခုထဲမှာ လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ လှိမ့်ဝင်လာပြီးတော့ စီးပွားရေးလည်း တစ်ဟုန်ထိုးတက်လာပါတယ်။ မြို့လည်မှာ ဟောင်ဟိုမြစ်လို့ခေါ်တဲ့ ကျုံးကလေးရှိတယ်။ ဒါက ရှေးတုန်းက နန်းတွင်းက အကျဉ်းသားတွေကို ထားတဲ့ နေရာလို့ ပြောစမတ်ပြုကြတာပဲ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့ သေသေချာချာ စာထဲမှာ မတွေ့ဖူးဘူး။ ပါးစပ်ရာဇ၀င်နဲ့တူပါ့။
ဒါက ည ၇နာရီခွဲလောက်ဆိုရင် ဟောင်ဟိုမြစ်ထဲမှာ ရေပန်းလွှတ်တာ
ဒါက ဟောင်းဟိုမြစ်ထဲမှာ လှေစီးရင် တံတားအောက်ရောက်တော့ ရိုက်ထားတာ
အဲ့ဒီ ဟောင်းဟိုမြစ် (မန္တလေးက ကျုံးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်၊ ဒါပေမယ့် လေးထောင့်စပ်စပ်ရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့) ထဲမှာ နွေရာသီ ညပိုင်း လှေစီးလို့အရမ်းကောင်းတယ်။ မြို့က မြို့သစ်နဲ့ မြို့ဟောင်းဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ မြို့သစ်ထဲမှာ လမ်းတွေက နည်းနည်းကျဉ်းပြီးတော့ တစ်ခြားဒေသက လူတွေလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာနဲ့ လူဦးရေများလာတာက တစ်ကြောင်း၊ အစိုးရဋ္ဌာနတွေကို တစ်စု တစ်စီးထဲ ထားလိုတာက တစ်ကြောင်း မြို့သစ်ကို ထပ်မံတည်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာတော့ ကုန်သွယ်ရေး ဗဟိုဋ္ဌာန၊ အစိုးရဋ္ဌာနတွေ၊ နန်တုန် တက္ကသိုလ်နဲ့ အခြားသော အဆောက်အဦးအသစ်တွေနဲ့ လမ်းတွေဘာတွေ ကျကျနန ဖောက်ထားပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကလည်း ဟက်ဗလုပ်ကြီးခင်ဗျ။ နည်းတာကြီးကို မဟုတ်တာ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဘက်စကတ်ဘောကွင်း၊ စားပွဲတင်တန်းနစ်၊ ကြက်တောင်၊ ရေကူးကန် အစုံပေးထားတယ်။ စာကြည့်တိုက်ကလည်း အကြီးကြီး၊ မေဂျာတွေကလည်း အစုံ၊ ကျောင်းသားတွေ အဆောင်၊ ကျောင်းသူတွေ အဆောင် တွေကလည်း တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ။ သွားတိုင်း ကျောင်းပြန်တက်ချင်စိတ်ပေါက်ပေါက်လာတယ် အဟုတ်။ မြို့ထဲမှာတော့ ကောလိပ်လေးတွေရှိပါတယ်။ ကောလိပ်ဆိုပေမယ့်လည်း တက္ကသိုလ်လိုပါပဲ facility အစုံရှိပါ့။ ကျွန်တော်ဆို အမြဲတမ်း စနေ တနင်္ဂနွေပိုင်း ကောလိပ်တစ်ခုမှာ ဘောလုံးသွားသွားကန်တယ်။
ဟောဒါက ကောလိပ်က ဘောလုံးကွင်း (မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ GTC လို နည်းပညာ ကောလိပ်ပေါ့) မြက်ခင်းအတုခင်းပေထားတာ။
ဒါက မြို့ဟောင်းက တိုက်တန်းတွေ
ဒါက မြို့ဟောင်းက တိုက်တွေ၊ အခုမြင်နေရတဲ့ ခုံးခုံးကြီးက ဆေးရုံ
ဒါကလည်း မြို့ဟောင်းထဲ က ဟိုတယ်တစ်ခု
ဒါလည်း မြို့ဟောင်းထဲက နေရာလေးတွေ
ဒါကတော့ မြို့သစ် ဘက်ပိုင်းက ရှော့ပင်းမောရဲ့ ရှေ့ကအရုပ်တွေ။ မြို့သစ်တည်ရင် ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း၊ ရှော့ပင်မော၊ ဘက်စ်ကား၊ စတဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ အပြည်အစုံထည့်ပြီးတော့မှ လူတွေကို ရွှေ့ခိုင်းတာ တွေ့ရတယ်။
ဒါက Keppel' Nantong တစ်နှစ်တစ်ခါလုပ်တဲ့ အားကစားပွဲကို ကောလိပ်တစ်ခုမှာလုပ်နေကြတာ... အခုမြင်ရတာက လွန်ဆွဲပြိုင်နေကြတာ။
ဒါကတော့ လန်းစန်းတောင် (Wolf Hill) ပါ။ နန်တုန်းမှာတော့ ဒီတောင်တစ်လုံးပဲ လောက်လောက်လားလား လက်ညှိုးထိုးစရာရှိတယ်။
ဒါက လန်းစန်း ရဲ့တောင်နံရံ လှလို့ ရိုက်ထားတာပါ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး
ဒါကတော့ ဆုတောင်းတဲ့ သစ်ပင်ပါတဲ့ သစ်ပင်မှာ အဲ့ဒီ အနီရောင်စာတမ်းလေးတွေ ချိတ်ပြီးတော့ ဆုတောင်းကြတယ်.... ကျွန်တော်ကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်
ဒါက တောင်ထိပ်က မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဒဘာသာ ကျောင်းဆောင်
ဒါက လန်စန်း ထိပ်ကနေလှမ်းဆွဲထားတာ... တိုက်အမြင့်ကြီးက စီးပွားရေး စင်တာ၊ ရှေ့က ခုံးခုံးကြီးက အားကစားရုံ ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိသတဲ့
ဒါက လန်စန်းအပြန်နောက်ကျလို့ ဆိုင်ကယ်ထားတဲ့ ၀န်းက သော့ပိတ်သွားပြီး တိုင်ပတ် ကွိုင်ပူနေတုန်း ကျွန်တော့ ရှု့မငြီးကလှမ်းပြီး လက်ကလိထားတာ..... တရုတ်လိုကလည်း မပြောတတ်၊ အပေါက်စောင့်နဲ့ နာရီဝက်လောက် ကျောက်ခေတ်စကား ခြေတွေရော၊ လက်တွေရော ၀ူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ ပြောယူလိုက်တော့မှ ဆိုင်ကယ်ရုံ သော့ပိတ်သွားတဲ့ ငနဲ ပြန်ပြီး ဖွင့်ပေးတော့တယ်။ ဒါတောင် နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်လောက် စောင့်ယူရသေးတယ်။
ဒါကတော့ စောစောက အပေါ်စီးက လှမ်းမြင်နေရတဲ့ အားကစားရုံကြီးပါ။ လူကိုတော့ ဖယ်ကြည့်ကြပါ။ လူမပါတဲ့ ပုံပြန်ရှာတာ မတွေ့တော့လို့.... :)
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပေါ့လေ... ခုတော့ ဒီမြို့ကလေးနဲ့ ခွဲပြီးတော့ နောက်ထပ် သင်္ဘောအသစ်ဆောက်မယ့် ရှန်ဟိုင်းကို ရွှေ့ရပါဦးမယ်။ ရှန်ဟိုင်းမှာ အလုပ်မစခင်တော့ နှစ်ပတ်လောက် နားပြီး စင်ကာပူ ခဏပြန် သက်တမ်းတိုး၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို ခဏတဖြုတ်လောက်တော့ ပြန်ပြီး အနားယူမလားလို့ စိတ်ကူးနေတာပဲ။
လူတွေ ရှုပ်ရှက်ခတ်၊ ကားတွေ ပြွတ်သိပ်ပြီးတော့ ဈေးကြီးတဲ့ ရှန်ဟိုင်းကိုတော့ နန်တုန်လောက် ပျော်မယ်မထင်ပါဘူး။ သူများမြို့တွေ ရွာတွေကိုယ့်မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် တိုးတက်လာတာမြင်ရလေတော့ အားကျမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်နေ့နေ့ပေါ့.... "အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့် ပမာပ၊ ဒို့ခေတ်ကိုသာ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ" ဆိုပြီး သီချင်းလေး ခပ်တိုးတိုး ရွတ်ရင်း စောင့်စားလျှက်ပေါ့လေ။
Posted by AH at 12/08/2011 08:55:00 PM
TZH1985 December 8, 2011 at 10:23 PM
သူ့ဟာနဲ့ သူလှလှပပ ရှိတယ်ဗျာ... "အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့် ပမာပ၊ ဒို့ခေတ်ကိုသာ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ... မျှော်နေပါသည်။
စင်ကာပူရမှ ၀ဲကမ်းဘက် နောင်တော်
AH December 8, 2011 at 10:27 PM
၀ဲလ်လကမ်း ပါ အစ်ကိုတော်.... :)
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် December 8, 2011 at 11:09 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 9, 2011 at 3:48 AM
ကျောက်တောင်ကြီးမှာ ကပ်ပေါက်နေတဲ့ တိုက်ကပ်ပန်းနွယ်ပင်ကြီး လှလိုက်တာ
ကို AH ကတော်ကလည်း ဘလော်ဂါရဲ့ ဇနီးပီသတယ်.
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်မြို့ရောက်ရင် နောက်ထပ် မြို့အကြောင်း အသစ်တွေ ထပ်ရေးလို့ရတာပေါ့နော်။
မဒမ်ကိုး December 9, 2011 at 10:09 AM
တွေ့ဘီ တွေ့ဘီ ကိုအားထောင်ကိုး)
စံပယ်ချို December 9, 2011 at 4:20 PM
နန်တုန်ကို AH ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ရောက်ခဲ့ပြန်တယ်
လန်းစန်းတောင် (Wolf Hill) ကိုသဘောကျနေမိတယ်
ဘယ်ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့နော်
ကိုရင် December 10, 2011 at 7:02 AM
ကိုအွတ်ထောင်ရယ်..အားကစားရုံကို ကြည့်မလို့ဟာ လူကရှုပ်နေတယ်.:D
ဘိုဖြူ December 10, 2011 at 9:17 PM
ညိမ်းနိုင် December 10, 2011 at 10:09 PM
ထွက်တော်မူ နန်တုန်ကခွာပြီပေါ့လေ....၊ရှင်ကျားပူမှ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား...:)
blackroze December 11, 2011 at 1:03 AM
Candy December 12, 2011 at 9:47 AM
စင်္ကာပူရောက်နေတယ်ဆို ကိုမောင်သန့်ပြောတယ် :D
mstint December 12, 2011 at 11:49 PM
ဗဟုသုတတွေယူသွားတယ် မောင်အောင်ထွဋ်ရေ။ ကျေးဇူးး)
ဓာတ်ပုံအားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ မြို့ဟောင်းက
တိုက်တွေ ဟိုတယ်တွေကလည်း အမိုက်စားပါလား။